Mashiinka Musiibada ee khadka tooska ah ee Shiinaha Shiinaha T6570 | Chunye
Mitaarka Dhibaatada tooska ah ee T6570
Mabda'a dareeraha isku-buuqsanaanta / qulqulaya wuxuu ku saleysan yahay isku-darka nuugista infrared iyo habka iftiinka firidhsan. Habka 'ISO7027' waxaa loo isticmaali karaa in si isdaba-joog ah oo sax ah loo go'aamiyo jahwareerka ama feejignaanta dhoobada. Sida ku cad tiknoolajiyada iftiinka laba-firdhinta ee 'infrared' ISO7027 saamayn kuma yeelanayso chromaticity-ka si loo go'aamiyo qiimaha uumiga dhoobada. Waxqabadka is-nadiifinta waxaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo deegaanka isticmaalka.
Xog xasilloon, waxqabad la isku halleyn karo; ku-shaqeynta is-baaritaanka si loo hubiyo xogta saxda ah; rakibidda fudud iyo
Isticmaalka Caadiga ah
Mitirka jahwareerka internetka waa aalad falanqeyn online ah oo loogu talagalay in lagu cabbiro jahwareerka biyaha ee ka yimaada shaqooyinka biyaha, shabakada dhuumaha degmada, habsami u socodka tayada biyaha ee warshadaha, wareejinta biyaha qaboojinta, qulqulka shaandhada kaarboonka firfircoon, dheecaanka xareynta xuubka, iwm. Gaar ahaan daaweynta degmada bulaacada ama biyaha wasakhda ah ee warshadaha.
Hadday qiimeynayso dhoobada firfircoon iyo geedi socodka daaweynta bayoolojiga oo dhan, falanqaynta biyaha wasakhda ah ee la soo daayay ka dib daaweynta daahirinta, ama ogaanshaha isku-uruurinta qulqulka heerar kala duwan, mitirka fiirsashada dhoobada ayaa bixin kara natiijooyin cabbir joogto ah
85 ~ 265VAC ± 10%, 50 ± 1Hz, isticmaalka awoodda ≤3W;
9 ~ 36VDC, isticmaalka korontada: ≤3W;
Dhibaato: 0 ~ 9999NTU
Soo bandhigid weyn, isgaarsiinta caadiga ah ee 485, oo leh qadka tooska ah iyo qadka tooska ah, 235 * 185 * 120mm cabirkiisa, 7.0 inji shaashad shaashad weyn.
2.Qaabinta duubista xogta qalooca ayaa la rakibay, mashiinku wuxuu badalayaa akhrinta mitirka gacanta, iyo baaxadda su'aalaha si aan macquul ahayn baa loo qeexay, si xogtu mar dambe u lumin.
3.Real-waqtiga duubista khadka tooska ah ee MLSS / SS, xogta heerkulka iyo gooladaha, oo ku habboon dhammaan mitirrada tayada biyaha ee shirkadeena.
4.0-20NTU, 0-400NTU, 0-4000NTU, noocyo kala duwan oo qiyaaso ayaa la heli karaa, oo ku habboon xaalado shaqo oo kala duwan, saxnaanta cabirka ayaa ka yar ± 5% qiimaha la qiyaasay.
5. Cilad-darrada cusub ee guddiga awoodda waxay si wax ku ool ah u yareyn kartaa saameynta faragelinta elektromagnetic, xogtuna way xasiloon tahay.
Naqshadeynta mashiinka oo dhan waa mid aan biyuhu xirin oo aan boodh lahayn, daboolka dambe ee qaybta xiriirinta ayaa lagu daray si loo kordhiyo nolosha adeegga ee jawiga adag.
7.Panel / derbiga / rakibida tuubada, seddex ikhtiyaar ayaa loo heli karaa si loo buuxiyo shuruudaha rakibida goobta warshadaha kala duwan.
Xiriirinta korantada Xiriirka ka dhexeeya aaladda iyo dareeraha: korontada, calaamadda wax soo saarka, qalabka digniinta gudbinta iyo xiriirka ka dhexeeya dareeraha iyo aaladda dhammaantood waxay ku dhex jiraan aaladda. Dhererka siligga leedhka ee korantada go'an badanaa waa 5-10 mitir, iyo calaamadda u dhiganta ama midabka ku dhejisan dareeraha Gali siligga barta u dhiganta gudaha qalabka oo adkee.
Habka rakibida qalabka
Baaxadda cabirka 0-9999NTU
Qaybta cabirka NTU, mg / L
Qaraarka 0.001; 0.01; 0.1; 1
Cilad aasaasi ah ± 1% FS
Heerkulka -10 ~ 150 ℃
Xallinta heerkulka 0.1 ℃
Heerkulka qalad aasaasi ah ± 0.3 ℃
Wax soo saarka hadda Laba 4 ~ 20mA, 20 ~ 4mA, 0 ~ 20mA
Soosaarka signaalka RS485 MODBUS RTU
Hawlaha kale Diiwaanka xogta & Muujinta Qalooca
Xiriiriyaha gudbinta gudbinta 3 Kooxda: 5A 250VAC, 5A 30VDC
Ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah 85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, isticmaalka awoodda≤3W
Xaaladaha shaqada Ma jiraan faragelin xoog leh oo magnet ah oo dhulka ka baxsan
Heerkulka shaqada -10 ~ 60 ℃
Qoyaan qaraabo ≤90%
Miisaanka 1.5 kg
Cabirka 235 × 185 × 120mm
Rakibaadda Gidaarka ayaa la saaray
Hore: Mitaarka Dhibaatada tooska ah ee T6070
Xiga: CS6514 Dareemayaasha Amooniyam
Mitaarka Xadgudubka Gacanta
Noocyada Meter-ka Turbidity
Noocyada Meter-ka Dhibaatada Leh
Mitaarka Cudurka Biyaha
CS1501 Muraayadaha Guryeynta pH Sensor
CS2733 dareeraha ORP
Khadka Tooska ah ee Ion Meter T6010
Sensor-ka Electromagnetic, Dareeraha Dareemida Isukeenista Daawaha Titanium, Waxqabadka TDS Sensor, Chlorophyll Sensor, Quadrupole Shaxanka Samaynta Iskuduwaha Sawirka, Feeraha Dareeraha Fududeeyaha,